सहकारीबाट नयाँ जीवन पाएकी खिल्का : पहिले हरेस खाएपनि अहिले गाउँकै उदाहरण :: Sahakari Akhabar
के हो ? अन्तर सहकारी कारोबार
सहकारीको सिफारिसमा बैंकले सहुलियत कर्जा दिने
स्थिरीकरण कोषको सवा २ करोड उपयोगविहिन, सञ्चालनमा आउनै कठिनाइ
पूर्वनेपाल सहकारीको २१औं वार्षिकोत्सवमा बिबिध कार्यक्रम
एनएमसी डेरीमा दैनिक १५ हजार दूध संकलन
संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बैंकको सम्मान
मेगा ड्रिम बहुउद्देश्यीय सहकारी १० वर्ष पुरा
कलश सहकारीको कोरोना बिशेष ऋण सिङ्गल डिजिटमा
नगरपालिकाद्धारा सहकारीका सदस्यलाई एक रुपैंया अनुदान
सहकारी ‘मह’ जोडी जस्तै रहेछ : हरिबंश आचार्य
२०७७ माघ १४ गते , बुधवार
सहकारीबाट नयाँ जीवन पाएकी खिल्का : पहिले हरेस खाएपनि अहिले गाउँकै उदाहरण
२०७६ पौष ३ गते , विहीवार Sahakari Akhabar
सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका ४ की खिल्का सुनुवार लाई श्रीमानले छोडेपछि घर व्यहार चलाउने र छोरा छोरी पढाउने जिम्मेवारी उनमाथी आयो । छोरा \_छोरी सानै, न आफ्नो जागिर, न कतैबाट २ \_४ पैसा आउने बाटो । कमाएर ल्याउने श्रीमान नै नभएपछि घर व्यवहार चलाउन र छोराछोरी पढाउन नसक्ने अवस्था भयो उनको । “आम्दानीको बाटो नभएपछि केहि व्यवसाय गरौ भन्दा एकल महिला यसले के नै गर्न सक्छे र ? गाउँमा घरमा यी यस्तै कुरा गरी ऋण कसैले पत्याएनन्,” उनले भनिन् । उनी के गर्ने उनी अन्योलमा पर्दै थिइन । जव २०६४ लाख सालमा कमलामाई बचत तथा ऋण सहकारी दुधौली खुल्यो तव उनको जीवनले अर्कै मोड लियो ।
जेठि छोरी ल्याप टेक्निसियन पढाई पुरा गरि लाहान स्थित मोर्डन हस्पिटलमा काम गर्न थालिसकेकी छिन् । कान्छो छोरा भने कक्षा १२ मा पढ्दै छ । उनी भन्छिन्, “श्रीमानको मृत्यु भएपछि कमाउने साहारा नै टुटेको भन्दै जिन्दगी नै अन्धकार देखेकी मलाई सहकारीले नया जिन्दगी दियो ।”
जिन्दगीदेखि हार खाइसकेकी खिल्कालाई सहकारीले नयाँ जीवन दिएको छ । सरकारीबाट उनले सुरुमा २० हजार लिएर तरकारी खेति सुरु गरिन । १ कठ्ठा जग्गामा तरकारी खेति गरेकी उनको तरकारी खेतिबाट राम्रो आम्दानी भएपछि फेरि ऋण थपिन्, ३० हजार, ४० हुदै उनले ५० हजारसम्म ऋण लिइन र किस्ता तिर्दै गइन् । एक कठ्ठा जग्गाबाट तरकारी खेति सुरु गरेकी सुनुवारले अहिले बढाएर ५ कठ्ठामा तरकारी खेति गरेकि छिन् ।
अहिले उनको बारीमा काउलि, बन्दा, टमर, भेन्डि, बोडि, सिमि, खुर्सानी, करेला, काक्रो, लसुन, प्याज लगाएतका तरकारी छन् । उनले सिजन अनुसार मौसमी तथा वेमौसमी दुवै तरकारी लगाउछिन् । तरकारी खेती गरेकि सुनुवार विहान देखि साझँ सम्म तरकारी खेतीमै व्यक्त हुन्छिन् । उनले तरकारी खेति मात्र हैन तरकारीका नर्सरी (वेर्ना) समेत लगाउछिन् । २२ दिनदेखि तयार हुने वेर्ना ३० दिनसम्म सम्म बेच्न मिल्छ । एक पटक वेर्ना बनाउदा उनले ३० दिनमा १ लाख ४० हजार सम्म कमाउछिन् । उनले बनाउने वेर्ना जिल्ला भरि नै विक्रि हुने गरेको छ । वेर्ना र तरकारी खेति गरि महिनामा लगभग ५० हजार सम्म कमाउने गरेको उनको भनाई छ ।
तरकारी खेतीबाट उनले २ छोरीलाई प्राविधिक शिक्षा पढाएकी छिन् । जेठी छोरीलाई ल्याव टेक्निसियन पढाउन सफल भइन भने कान्छि छोरीलाई अहेव पढाइन । अहिले त जेठि छोरी ल्याप टेक्निसियन पढाई पुरा गरि लाहान स्थित मोर्डन हस्पिटलमा काम गर्न थालिसकेकी छिन् । कान्छो छोरा भने कक्षा १२ मा पढ्दै छ । उनी भन्छिन्, “श्रीमानको मृत्यु भएपछि कमाउने साहारा नै टुटेको भन्दै जिन्दगी नै अन्धकार देखेकी मलाई सहकारीले नया जिन्दगी दियो ।”
तरकारी खेति गर्नुअघि घर खर्च जुटाउन र छोराछोरी पढाउन निकै गाहो भएको उनलाई अहिले तरकारी खेतिले छोराछोरीको पढाई खर्च र सम्पूर्ण घर खर्च टार्न सहज भएको छ । जिन्दगीमा केहि गर्न नसकिने भन्दै हार खाइसकेकी खिल्का अहिले आफ गाउँ कै उदाहरणीय महिला भएकी छिन् ।
नमुना बन्दै, सहकारीको कृषि अनुसन्धान केन्द्र ...
२०७६ पौष ३ गते , विहीवार
गाँउका घरमा लागेको ताल्चा खोल्ने उद्देश्य छ ...
महिलालाई व्यवसायीक र आत्मनिर्भर बनाउँदै सहकारी ...
अति प्रभावित जिल्ला अध्यक्षहरुको गोष्ठी ...